Audacity 2.3.3 ndiyo yazvino vhezheni zvakare | Linux Vakapindwa muropa
Svondo yekupedzisira takadaro echo yekusvika kwe Audacity 2.4.0. Icho chaive chikuru chiitiko chakauya neshanduko senge kuenderana kwepamutemo ne macOS Catalina kana rutsigiro rweOpus, asi zvakare yakaunza shanduko yanga isina kurongwa. Iyo idhigi iyo yavakafunga zvakakomba zvakakwana kuti varege kupa yazvino vhezheni uye vodzokera kune yakapfuura, sezvatinoona mune yayo kurodha peji.
Kunyangwe pave pasina chirevo chepamutemo, vataura kuti Audacity 2.4.0 yakaunzwa chirwere chakakonzera kurasikirwa kwemaodhiyo kana huwori. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kuti usagadzirise kune yazvino vhezheni, inogona kuve dambudziko kana isu tiri kushandisa iyo Flatpak package nekuti ndiyo yekutanga yekumutsiridza uye chitsva chiverengero neakakomba bug yaive yatovepo.
Wakavandudza kune Audacity 2.4.0? Kuchenjerera neizvi
Isu parizvino tinotenda kuti iko kukanganisa kunoitika kana iwe uine mapurojekiti maviri akavhurwa panguva imwechete uye iwe unama odhiyo kubva kune imwe projekiti kuenda kune imwe. Kutenda kuna Jack L kubva FreeBSD nekutinyevera padambudziko uye kutora matanho ekuzviburitsa.
Panguva ino uye kusvika purojekiti yaburitsa inogadziridza dambudziko, zvakanaka kugara ne v2.3.3 ye software. Kune avo vatovandudza, pane mhinduro kana chenjedzo yatinogona kutora: isu tinofanirwa kuona kuti isu tine chete chirongwa chakavhurwa. Kubva pane izvo zvinoita, kuwanda windows kana zviitiko zve Audacity zvatakavhura, rakakura dambudziko rinogona kuva.
Pasina chirevo chakadzama chepamutemo, hazvigoneke kuziva kuti vachaburitsa riini kupfuura zvingangoitika Audacity 2.4.1 iyo inogadzirisa iyi bug asi, tichifunga kuti ivo vatove nekuziva nezve kuvapo kwayo, iyo nyowani vhezheni inofanirwa kusvika mune nyaya yemaawa kana mazuva. Kusvika panguva iyoyo, vashandisi veLinux vanogona kutora mukana wehusimbe hwemapakeji eSnap uye vanoshandisa yavo vhezheni yakanga isati yagadziriswa. Gore rega rega rine sirin'i yakashongedzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Audacity 2.3.3 ndiyo zvakare iri yepamusoro-kudhara vhezheni. Iyo purojekiti inodzokera pasi nekuda kwechirwere chakakomba
Dzimwe CMS dzemablog. Vhura sosi sosi